'Inyani njengoko siyibona' incwadi uMartin Vrijland ngoku iyafumaneka: UMartin Vrijland
Kwiminyaka yakutshanje bendihlala ndibuzwa ukuba kutheni ndingashicileli incwadi. Besele ndiyazi ukuba le ncwadi izokuza, kodwa umfanekiso wawusenziwa. Oko kunokuchazwa kakuhle njengokulinda ukugqitywa kokukhutshelwa kwefayile kwifowuni yakho okanye kwikhompyuter. Kuthatha ixesha ukuba lonke ulwazi lufunyenwe. Ngamanye amaxesha ndiyabuzwa ukuba ndilufumana phi lonke ulwazi. Umzekelo, abantu bacebisa ukuba kusenokwenzeka ukuba ndifunde kakhulu. Nangona kunjalo, ndifunde kancinane ngokusemandleni, ngaphandle kwe (fake) iindaba zeendaba ezivela kwimithombo yeendaba eqhelekileyo, kuba ndisebenzisa iziganeko zangoku ukukhombisa iindlela apho kudlalwa abantu kwaye kudweliswe khona.
Yonke into esiyifunayo kufuneka siyazi ngengqondo, kodwa ivela kulwazi lwethu lwantlandlolo. Kungenxa yoko le nto ndiyithelekise nokukhuphela ngasentla.
"Inyani njengoko siyibona" ​​ichaza indlela umhlaba kunye nendalo esiphila kuyo yakhiwe. Yinguqulelo ebanzi necwangcisiweyo yenani elikhulu lamanqaku endawabhala malunga noku kule webhusayithi. Amagama acacileyo ayenza ukuba ibe yincwadi efaneleke yonke iminyaka. Incwadi ayisusi nje kuphela nakuphi na ukucaphuka ngokwenkolo okanye kokomoya, kodwa ikwabonelela ngengcaciso ngazo zonke izisombululo esijongene nazo. Uninzi lweenkokeli zokomoya okanye zenkolo zikuthumela kwicala elithile, kodwa ziphakamisa ngakumbi amanqaku emibuzo, ukuze ungaqiniseki kwaye uqinisekile. Into ihlala iyingqushu. Ndiqinisekile ukuba le ncwadi izakususa naluphi na uhlobo lwamathandabuzo kwaye iya kuqinisekisa ukuba ekugqibeleni uyakuqonda ukuba uphi kwaye kulula kangakanani indlela yokuphuma.
Kuba ndakhe ndafumana isiseko apho ndidla ngokubhala le ndawo, andinakukwazi ukuthengisa le ncwadi. Lowo ingangumsebenzi wentengiso. Ke ngoko ndinikezela le ncwadi njengesipho xa ususa ubulungu bonyaka kule webhusayithi. Ngoku abanye abanikezeli ngoku bakhoyo baya kucinga: "Owu, ndifuna incwadi yasimahla". Nangona kunjalo, kuba andikwazi ukuhlawula iindleko zokuprinta nokuthumela ngaphandle, oko kunokwenzeka kuphela xa uthatha ubulungu obutsha bonyaka. Ubulungu obunjalo ngokwenene ngumnikelo. Ngesipho sakho ndiyakwazi ukuhlawula iindleko zokuprinta nokuthumela incwadi. Apha ngezantsi ungayibona ukuba injani na incwadi.
Isebenza njani Ucinezela u 'abe ilungu, ukhethe enye ubulungu bonyaka okanye ngaphezulu. Sele usemnye ubulungu bonyaka ye- € 25. Le nkqubo iya kuthi ngoko ngokuzenzekelayo ithumele kum ubulungu bakho ngonyaka, ukuze ndikuthumele i-imeyile endicele kuyo idilesi yokuthumela kuwe. Olu lwazi alugcinwanga ndim kwaye akukho nto iya kwenzeka kuyo, ngaphandle kokuba isetyenziselwe ukuthumela incwadi kuwe. Ngobulungu bakho bonyaka uba ngumxhasi ngonyaka kwaye uyawuxhasa umsebenzi wam ukuze ndiqhubeke.
Ushicilelo lokuqala nolindelekileyo lokuhanjiswa kweencwadi luya kuba ngoNovemba kulo nyaka. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ulilungu kwangoko, kuba yonke into inxulumene nokukwazi ukuhlangabezana neendleko zokuprinta kunye nokuthumela. Ngomnikelo wakho wobulungu uyaqhubeka nokuxhasa umsebenzi wam wale webhusayithi kunye neendleko endizenzayo.
tags: ncwadi, de, le, eziziimbalasane, Martin, ilizwe elikhululekile, kuqonda, we, inyani, njenge
25 Septemba 2019 kwi-07: 38
Kuqala ndaba 'nomthengi ngonyaka' ukufumana le ncwadi, kodwa ndiyacinga ukuba ininzi kakhulu kuninzi. Yiyo loo nto ngoku ndinikezela le ncwadi ngobulungu obuqhelekileyo bonyaka. Ke akukho nto ihleli isekhona, kodwa emva kwayo yonke loo nto malunga nesithunywa.
29 Septemba 2019 kwi-09: 58
Ngaba ngumbono wokuthengisa le ncwadi ngekhompyutha njenge-e-ncwadi? Ndicinga ukuba kunokwenzeka ngebol.com.
Ngokuqinisekileyo ndiza kuyithumela incwadi yakho, ndinomdla wokwazi ukuba umxholo uhambelana njani namanqaku onawo.
Ngokuqinisekileyo iya kungqinelana namanqaku akho, kodwa ngakumbi ngakumbi nangakumbi ngakumbi?
5 Oktobha 2019 kwi-12: 40
Ewe, ndinombuzo ofuna ukwazi. Ucacise rhoqo ukuba ukongeza ngokuhambelana nemicimbi yangoku kunye nokuphanda nokubhala amanqaku kunye nokusinda ngokubanzi, phantse akunakwenzeka ukuba ubhale incwadi ngaxeshanye. Ulawule njani?
6 Oktobha 2019 kwi-12: 49
Njengoko usenokuba uqaphele, ke ngoko ndibhala amanqaku ambalwa ukuze ndikhulule ixesha lokwenza oko.
UPeter Westerhout wabhala wathi:
16 Oktobha 2019 kwi-14: 28
« I-Greta Thunberg I-UN intetho isikhumbuza "iintsana ezilahliweyo ngaphandle kwentetho" ye-Iraq
UPopu uFrancis ubiza iinkokheli zehlabathi kwiVietnam kwi14 ngoMeyi 2020 ngepact yomhlaba »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.091.413